Sucuudiga: “Jamaal Khashoggi wuu dhintay ,waxaana Xirnay Saraakishii dishay ” (Daawo) – Radio Daljir
Oktoobar 20, 2018 8:23 g 0
Ku soodhawadda warbixinadda la xiriirka wariyihii la la’a ee lagu tuhmay in lagu dilay qunsuliyadda Sucuudigu ku leeyahay Istanbul, iyadoo warar kaladuwan dilka Khashoogi ay ka soo baxayaan iyo sucuudiga oo qirtay dilka khashoggi
Dowladda Sacuudiga ayaa markii u horeysay xaqiijisay geerida Wariyihii la la’aa Jamaal Kashoggi, kaasoo la baadigoobayay nolol iyo geeri tan iyo markii 2-dii bishan October uu galay dhismaha Qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul.
Wakaalada wararka ee Sacuudiga ayaa shaaca ka qaadya in Jamaal Kashoggi uu u geeriyooday dagaal ka dhacay gudaha Qunsuliyadda, waxaa la sheegay inay dagaalameen isaga iyo dad joogay gudaha Qunsuliyadda.
Sacuudiga ayaa sheegay in illaa 18 qof loo xiray arrintan, isla markaana uu socdo baaritaano dheeraa ah.
Qirashada Sacuudiga ee dilak Jamaal Kashoggi ayaa soo afjareysa todobaadyo socday howlgalo lagu baadigoobayay, iyadoo horay Warbaahinta Turkiga ay u shaaciyeen in Mr Kashoggi lagu dhex dilay Qunsuliyadda.
Hadalka Sucudiga ee dalka ,ama qaabka uu ku dhintay Jamaal Khashoogi waxaa siyaabo kala duwan uga hadlay Xubnaha Aqalka Cad ee dalka Maraykanka,Madaxweyne Trump iyo Xoghayaha Guud ee Qaramadda Midoobey Antonio Guterres.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo ka hadlay Warbixinta sucuudiga ee qaabka uu u dhintay Jamaal khashoggi ayaa yiri “ hadalka sucuudiga waa Mid lagu kalsoonan karro” laakin xogghaya Guud ee Qaramada midoobey Antonio Guterres ayaa aad uga naxay sharaxaadda sucuudiga ee qaabku u dhintay Jamaal.
Qaar ka mid ah xubnaha Golaha Wakiilada ee Aqalka Cad oo warbaahinta la hadlay dhinacooda ayaa sheegay in sheekadda sucuudiga an la fahmi karrin.
Hadalka Sucuudiga ayaa ahaa kii ugu horreeyay ee rasmiga ah ee ku saabsana dilka Khashoggi oo lagu dilay qunsuliyadda Turkiga ee Istanbul 18 maalmood ka hor, iyo qirashadii ugu horreysay maanta oo sabti ah uu qirto.
Khashoggi ayaa la waayay ka dib markii uu tagay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul ku dhawaad ​​1:15 pm. bishii Oktoobar 2 si uu u helo waraaqo u oggolaan lahaa in uu guursado Xaskiisa, Hatice Cengiz. Waxay kor u qaadday qaylo-dhaanta ka hor 5 saacadood, halkas ay wali sugaysay banaanka Qunsiyadda balse ay wayday ninkeedi ilaa iyo hadda.
Saraakiisha Turkiga ayaa aaminsan Khashoggi in la diley isla markiiba kadib markii uu yimid, iyo wajiga Cusub ee qirashadda an saxda ahayn qaabka loo dilay khashoggi.
Sarkaal kamid ahaa sirdoonka Sucuudiga qaybtana ka ahaa dilka khashoggi ayaa lagu qarxiyeey garigiisa Magaaladda Riyaad ,xili Wafdi kasocda Maraykanka oo baari lahaa kiska dilka khashoggi Riyaad ay tageen ,balse la dilay sarkaalkas,waxaase loogu shakinsayahay dilka sarkaalkaas Boqortooyadda sucuudiga.
Dhinaca kale Xukuumadda Sacuudiga ayaa sheegtay inay shaqada ka eriday Taliye kuxigeenka Sirdoonka Axmed Al-Assiri iyo La Taliyaha gaarka ee Dhaxalsugaha Boqortooyada Sacuudiga.
Sidoo kale waxaa la eryay Taliyihii Maxkamadda Sare ee Sacad al-Qahtani,kaas oo qayb muhiim ah ka ahaa qorshaha lagu khaarajiyey Khashoggi.
Saraakishan la eryay ayaa qayb ka ahaa shirqoolka lagu dilay khashoggi,balse waxaad modda insaysan saraakishan la eryay ka badbaadi doonin gacanta sucuudiga oo la khaarajin doono.
Turkiga ayaa wali haya Cadaymo kale oo dhab ah oo Muujinaya qaabka lagu dilay khashoggi balse waxaa laga sugayaa turkiga inay banaanka kenaan cadaymo kale oo muujinayaa sida xaqiiqada ah ee loo dilay jamaal.
Halkan Kadaawo Warbixin la xiriirta Qirashadda sucuudiga ee dilka Jamaal Khashoggi
Daljir kala soco wararka Jamaal Khashoggi, geeri iyo nololba.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 476 Wararka 19842